सेगि BRE ब्रेस्ट फर्म अप गर्न घरेलु उपचार - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सुन्दरता
सेगि Bre ब्रेस्ट फर्म अप गर्न घरेलु उपचार
घर सुन्दरता शरीर हेरचाह शारीरिक देखभाल oi-Kumutha द्वारा रीमा चौधरी अक्टुबर,, २०१। मा
स्तन झोल्नु सामान्यतया महिलाको लागि ठूलो समस्या हो जुन उनको 30० को उमेरमा छ। स्तन झिक्ने एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो जहाँ स्तनले आफ्नो दृढता र लोच गुमाउँछ। यहाँ हामीले स्तनहरू स्याग गर्नेका लागि केहि घरेलु उपचारहरू सूचीबद्ध गर्दछौं जसले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ।
उमेर बाहेक, त्यहाँ धेरै अन्य कारकहरू छन् जसले स्तनहरू बढाउँछन् जस्तै अत्यधिक वजन घटाई वा तौल, गर्भावस्था, स्तनपान इत्यादि।
राम्रोसँग फिट भएको ब्रा लगाएको महिला २० वर्षको उमेरदेखि नै स्तन झिक्नबाट पीडित हुन सक्दछ। स्तन क्यान्सर जस्ता केही रोगहरू वा क्षयरोग जस्ता समस्याले पनि स्तन झिक्न सक्छ।
ठिक छ, यदि तपाईं माथिको कुनै कारणले गर्दा स्तन चुहुनबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, यहाँ केहि सजिलो र सरल जडीबुटी उपचारहरू छन् जुन तपाईंको स्तनहरूलाई बलियो बनाउन सक्छ। एकचोटी हेर्नु।
१ जैतुनको तेल
जैतूनको तेलमा रहेको फ्याट्टी एसिड र एन्टिआक्सिडन्टहरूको कारणले, यसले बुढेसकालको लक्षणलाई उल्ट्याउन र स्तनलाई स्यागेसनबाट रोक्न मद्दत गर्दछ। यसले पोषक तत्वहरू समावेश गर्दछ जुन छालाको टोन साथै स्तनको आकार सुधार गर्न योगदान पुर्‍याउँछ।
तपाईंको हथेलीमा केही जैतुनको तेल लिनुहोस् र केही गर्मी उत्पन्न गर्नका लागि तपाईंको हातहरूमा यसलाई मिलाउनुहोस्। अब यो तेल तपाईंको स्तनमा माथिल्लो दिशामा लागू गर्नुहोस् र केही समयको लागि मसाज गर्नुहोस्। १ 15 मिनेटको लागि यो गर्नुहोस् र कम्तिमा -5--5 पटक यो कार्य दोहोर्याउनुहोस्।
२. मेथी बीउ
मेथीको दानाले तपाईंको स्तन उठाउन र झोल्नबाट बचाउँदछ। मेथीको दाना पुराना उपचारमध्ये एक हुन् जसले स्तनको चुहावट रोक्न मद्दत गर्दछ।
केही मेथीको दाना लिनुहोस् र तिनीहरूलाई मिश्रण गर्नुहोस्। अब तपाईको छातीमा यो बाक्लो पेस्ट लागू गर्नुहोस् र केही समयको लागि कुर्नुहोस्। यसलाई २०-२5 मिनेट पछि नुनको पानीले धुनुहोस्। एक दिनमा दुई पटक यो दोहोर्याउनुहोस्। झिकने स्तनको उपचार गर्नको लागि एक उत्तम घरेलु उपचार!
Ice. बरफ मालिश
बरफ मालिश एकदम उपयोगी छ जब यो स्तनको sagging को उपचार गर्न को लागी आउँछ। तपाईंले २- ice आइस क्युब्स लिनुपर्नेछ र केहि समयको लागि तपाईंको छाती मालिश गर्नुहोस्।
यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ एक मिनेट भन्दा बढि घाई गर्नुहुन्न किनकि अत्यधिक चिसोले रक्त नलीहरूलाई असर गर्न सक्छ। त्यसो भए नरम तौलियाको प्रयोग गरी तपाईको छाती सुकाउनुहोस् र तुरुन्तै राम्रोसँग फिट भएको ब्रा लगाउनुहोस्। तपाईले दिनमा २- times पटक गर्न सक्नुहुन्छ।
F. ताजा एलो भेरा
ताजा एलोवेरा जेल प्रयोग गर्नु तपाईंको स्याग्ने स्तनको उपचार गर्ने प्रभावकारी तरिकाहरू मध्ये एक हो। पातहरूबाट केही एलो जेल बाहिर निकाल्नुहोस् र १० मिनेटको लागि गोलाकार गतिमा यस जेलबाट तपाईंको छातीमा मसाज गर्नुहोस्। अब, यसलाई केहि बेर बस्न दिनुहोस् र केहि समय पछि नुनको पानीले धुनुहोस्।
अनार एक एंटी-एजिंग कम्पोनेन्ट हो जसले स्यागिंग ब्रेस्टहरूको उपचार गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईंले अनार र रायोको तेलको पेस्ट बनाउनु पर्छ र तपाईंको मिश्रणमा यो मिश्रण प्रयोग गरेर तपाईंको स्तनलाई मसाज गर्नुहोस्।
सुत्नु अघि १०-१ular मिनेट गोलाकार गतिमा यो गर्नुहोस्। अनार समावेश गर्ने अर्को तरिका भनेको अनारको तेल प्रयोग गर्नु र दिनमा दुई पटक तपाईंको स्तन मालिश गर्नु हो।
She. शिया बटर
शिया बटर एक प्राकृतिक अवयव हो जसले तपाईंको स्तन कडा बनाउन र यसलाई अझ सुदृढ पार्न मद्दत गर्दछ। तपाईंले केहि शिया बटर लिनु पर्छ र त्यसपछि यसलाई आफ्नो छातीमा लगाउनुहोस्।
१०-१-15 मिनेटको लागि माथिल्लो गोलाकार दिशामा मसाज गर्नुहोस्। केहि मिनेट प्रतिक्षा गर्नुहोस् र गुनगुने पानीले धोई दिनुहोस्। एक दिनमा २- times पटक यो उपाय अनुसरण गर्नुहोस्।
Ha. रासौल क्ले
रासौल माटो एक प्राकृतिक छाला-फर्मि ingred घटकको रूपमा परिचित छ जुन तपाईंलाई नरम र कडा स्तन दिन्छ। दुई चम्मच रासौल माटो लिनुहोस् र यसको बाक्लो पेस्ट बनाउनुहोस्।
अब यो तपाइँको छातीमा लागू गर्नुहोस् र माथितिर दिशामा मसाज गर्नुहोस्। केहि समयको लागि कुर्नुहोस् र यसलाई पूरै सुख्खा हुन दिनुहोस्। पछि यसलाई नुनको पानीले धुनुहोस्। यो स्तनको स्यागिंगका लागि उत्तम घरेलु उपचारहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंले प्रयास गर्न आवश्यक पर्दछ।
C। काकडी र अण्डाको पहेंलो
काकडी र अण्डाको जर्दी सँगै प्रयोग गर्नाले तपाईंलाई कडा स्तन दिन मात्र मद्दत गर्न सक्छ, नरम र कोमल छालाको साथ तपाईंको सेवा पनि गर्दछ।
काकडीको प्युरी बनाउनुहोस् र एउटा अण्डाको पहेंलो मिश्रण गर्नुहोस्। अब दुबै सामग्रीहरू सँगै मिश्रण गर्नुहोस् र तपाईंको छातीमा मिश्रण लागू गर्नुहोस्।
यसलाई तपाइँको छातीमा लगाउनुहोस् र मिश्रणलाई केहि समयका लागि सुख्खा हुन दिनुहोस्। यसलाई चिसो पानीले राम्ररी धुनुहोस्।
तपाईंको बच्चाको छालाको रंग कस्तो हुन्छ जान्ने
कसरी बंगाली शैली मा माछा करी बनाउन
एक बुढाई महिला संग विवाह को नुकसान
किन उभिएर पानी पिउने छैन
किन हामी हिंदीमा बकरीद मनाउँछौं
निष्पक्षताको लागि अनुहारमा टमाटर कसरी लागू गर्ने